Indoda ishona ngemuva kokuthatha i-Viagra – kanti nathandana naye uyamlahla | Scrolla Izindaba
Indoda ishona ngemuva kokuthatha i-Viagra – kanti nathandana naye uyamlahla
Ezimweni ezibuhlungu nezingavamile, owesilisa oneminyaka engama-59 wase-Migori e-Kenya ushone ngemuva kokubikwa ukuthi uphuze umuthi wokuthuthukisa ezocansi i-Viagra.
Ukufa kwale ndoda kugqamisa izingozi ezinkulu zempilo zokuhlanganisa imishanguzo yokuqinisa ezocansi nezimo zempilo ezingaphambilini.
Ngokombiko wamaphoyisa, lona wesilisa ushone ngemuva nje kokuba yena nowesifazane abebehamba naye bengene ehhotela ebusuku.
Phambilini kusihlwa, kubikwa ukuthi lona wesilisa uthengele lona wesifazane ukudla endaweni yokucima ukoma ngesikhathi esalinde ukuthi ajoyine naye egumbini lase hhotela.
Ngemuva kwesikhashana behlangane futhi, lona wesifazane wamazisa ukuthi useye esikhathini futhi ngeke akwazi “ukumsiza”.
Umbiko wamaphoyisa uthi owesifazane “ubengazi ukuthi le ndoda ibiphuze amaphilisi e-Viagra phambilini”.
Ngemuva kwalesi sambulo, umufi ubike ukuthi ubenomkhuhlane omkhulu ngaphambi kokuba isimo sakhe sibe sibi kakhulu.
Ngokusho komphathi wamaphoyisa ase-Ntimaru, uJohn Losia, umufi uqale ukububula ngesikhathi ephenduka ebheka phezulu embhedeni, nokuholele ekutheni owesifazane afune usizo kulowo osebenza endaweni yokucima ukoma.
U-bartender kubikwa ukuthi wazise umndeni wakhe owafika futhi wamphuthumisa esibhedlela esiseduze se-Mother and Child Health Centre, lapho ashonela khona uma efika.
Yize ukuhlolwa kukamufi kokuhlolwa kwesidumbu kungakakhishwa, i-Viagra ibithintekile ezinkulungwaneni zokufa kwalabo abanezimo zempilo ezingaphansi.
Ngokocwaningo oluthile, phakathi konyaka wezi-1998 nowezi-2007, i-Viagra yathinteka okungenani ekufeni kwabantu abayi-1,824 ikakhulu ngenxa yokuhlaselwa yisifo senhliziyo.
Ngenkathi izinga lobungozi kwabaningi abakhetha ukuthatha i-Viagra liphansi, usongo luphakeme kakhulu ngezimo zenhliziyo ezingaphansi.
Kowezi-2014, i-Senator yase-Kenya kubikwa ukuthi ibulawe yisifo senhliziyo esibangelwe ukusetshenziswa kwe-Viagra.